रोग विशेष « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
हाम्रो शरीर विभिन्न किसिमका कोषिकाहरु मिलेर बनेको हुन्छ । कोषिका भित्र क्रोमोजोम (वंशाणुगत गुणसुत्र) भन्ने तत्व बनेको हुन्छ । क्रोमोजोम भित्र झण्डै ३० हजार जीन हुन्छन् । यदि ती जीनमा
चीनको वुहानमा हृदयाघातले मृत्यु भएका दोलखाका ४० वर्षिय पुष्कर खड्काको शव ल्याउन समस्या
जनस्वास्थ्य सरोकार । चीनको वुहान सहरमा हृदयाघातका कारण मृत्यु भएका एकजना नेपाली नागरिकको शव नेपाल पठाउन समस्या भएको चीनस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीले बताएका छन्। नयाँ घातक भाइरस फैलनबाट रोक्न चीनले
नेपालमा सेतो दुवीको समस्या दिनप्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ । क्लिनिकमा आउने बिरामीको तथ्याङ्क हेर्दा ६ देखि ८ प्रतिशत सेतो दुवीको समस्या लिएर आउने गरेका छन् । सेतो दुवी शरीरमा छालालाई
जाडो महिनामा निमोनियाबाट कसरी बच्ने ?
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । जाडो समय सुरु हुँदै छ । यो समयमा धेरै ब्यक्ति निमोनियाबाट पीडिट हुने गर्छन् । अझ बिरामी, बालबालिका र बृद्धबृद्धाहरुका लागि निमोनिया अभिषाप नै बन्ने गरेको
-रक्तचाप परीक्षण गर्दा बोल्न हुँदैन । -कम्तीमा पाँच मिनेटको विश्रामपछि मात्र परीक्षण गर्दा राम्रो हुन्छ । -हातलाई टेबलको सहारा दिएर राख्नुपर्छ । -प्रेसर बढी भएमा एकछिन विश्राम लिएर पुनः जाँच लिनुपर्छ । -कोठाको वातावरण
मस्तिष्कघात के कारणले हुन्छ ? मस्तिष्कको रगतको नसा फुट्ने (ह्यामरेजिङ) र मस्तिष्क ओइलाउने (स्केमिक स्ट्रोक) गरी मस्तिष्कघात २ प्रकारका हुन्छन् । उच्चरक्तचाप र एन्युरिजमका कारण मस्तिष्कघात हुनसक्छ । उच्चरक्तचाप भएका
दाङमा सवारी चालकमा उच्च रक्तचापको समस्या देखिएको छ । जिल्लाको तुलसीपुर– ३ राम्रीमा २३ जनाको मृत्यु हुनेगरी भएको दुर्घटनापश्चात प्रहरीले थालेको सचेतना अभियानअन्तर्गत तुलसीपुरमा भएको चालकको स्वास्थ्य जाँचका क्रममा यस्तो
तपाईंको रक्तचाप कति छ ? ब्राजिलकी एक महिला मेरीयान डराइन् । विनाकारण तिनको नाकबाट भलभलती रगत बग्न थालेको थियो । ‘मैले त आफू मर्नै लागेछु भन्ठानेकी थिएँ’ भनी तिनी सम्झन्छिन्
थाइराइड घाँटीको अग्र भागमा हुने एउटा ग्रन्थि हो । जसले विभिन्न प्रकारका हर्मोन उत्पादन गर्ने काम गर्छ । यस्ता हर्मोनले शरीरलाई ऊर्जाशील र स्फूर्ति बनाइराख्छ । यिनै हर्मोनका कारण शरीरका
हरेक वर्ष मे २५ तारेखलाई विश्व थाइराइड दिवसका रुपमा मनाउने गरिएको छ । नेपालमा पनि विभिन्न जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरुको आयोजना गरिएको छ । विश्व थायराइड दिवस २०१९ को अवसरमा ललितपुरको जावलाखेलस्थित
थायराइड ग्रन्थी मानव शरीरका विभिन्न ग्रन्थीमध्ये एक महत्वपूर्ण ग्रन्थी हो । यो तपाईंको गलामा सानो पुतली आकारको हुन्छ । यो स्वास्थ्यका लागि धेरै महत्वपूर्ण अंग हो । यसले थायराइड हर्मोन
नाकमा देखिने समस्या र समाधानका उपायहरु
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । यतिवेला देशभर चिसो ह्वात्तै बढिरहेको छ । कतै भारि हिमपात त कतै लगातार शितलहर । जाडो मौसममा अधिकांश मानिसहरुलाई रुघाखोकीले बढी सताउने गर्दछ । के
नाकबाट रगत बग्ने समस्या, यस्ता छन् कारणहरु
सामान्यतया नाकमा नसा फुटेर रगत बग्ने गर्छ, यो थाहा भएकै कुरा हो । तर, नाकबाट रगत बग्नुको करिब ९० प्रतिशत कारण भने पत्ता लाग्न सकेको छैन । यद्यपि, नाकबाट रगत
टन्सिलाइटिस एक किसिमको घाँटीको संक्रमण हो । यसलाई टन्सिलको इन्फेक्सन पनि भनिन्छ । टन्सिलाइटिस विभिन्न किसिमका ब्याक्टेरिया र भाइरसले गराउँछ । टन्सिलाइटिस भएपछि घाँटी दुख्ने र खानेकुरा निल्न गाह«ो हुने
मानिसले एलर्जीलाई एलर्जीको रूपमा मात्र लिन्छन् । तर, कतिपय एलर्जीको समस्याले शारीरिक रूपमा अन्य समस्या पनि निम्त्याउन सक्छ । जस्तो कि एलर्जीले रुघाको समस्या निम्तिन्छ र त्यसले अन्य जटिलता निम्त्याउँछ
रिङ्गटा किन लाग्छ ?
हरेकले जीवनमा रिङ्गटाको अनुभव गरेको हुन्छ । मेडिकल भाषामा रिङ्गटालाई भर्टिगो भनिन्छ । यो रोग होइन । तर रोगको लक्षण हो । रिङ्गटाका आआफ्नै परिभाषाहरु छन् । आफ्नो वरिपरिका चिजहरु
के हो छारेरोग ? कारण, लक्षण, उपचार र अपनाउनुपर्ने सावधानी
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । छारेरोग एक विशेष प्रकारको मस्तिष्क सम्बन्धि समस्या हो । जहाँ मस्तिष्कको कुनै एक भाग वा पुरै मस्तिष्क अत्याधिक उत्तेजित भई मानिसमा अनौठो ब्यवहार देखा पर्ने, अजिव
ह्याम्स हस्पिटलमा न्युरो इन्टरभेन्सन पद्धतिबाट ब्रेन एन्युरिजमको सफल उपचार
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । धुम्बाराहीस्थित ह्याम्स हस्पिटलमा न्युरो इन्टरभेन्सन (शल्यक्रिया नगरी गरिने उपचार) पद्धतिबाट ब्रेन एन्युरिजमको सफल उपचार गरिएको छ । २० वर्षीया महिलाको एन्युरिजमको सफल उपचार गरिएको अस्पतालले जनाएको
यसकारण च्यापिन्छ नसा
मेरुदण्डमा नसासम्बन्धी अनेकौँ समस्या देखिन्छन् । तीमध्ये एक हो, नसा च्यापिने समस्या । यो कुनै ठूलो रोग नभई मेरुदण्डमा हुने मांसपेशी र नसाको कमजोरीका कारण हुने यान्त्रिक समस्या हो ।
अल्सर रोग के हो ? के खाने के नखाने ? यस्तो छ डाक्टरको सल्लाह
जनस्वास्थ्य सरोकार । आमाशय वा आन्द्राको भित्री भागमा विभिन्न कारणले कोतरिएर घाउ हुनुलाई अल्सर भनिन्छ । विगतमा नेपाली समाजमा यो समस्या धेरे देखिन्थ्यो र शल्यक्रियाबाट धेरै उपचार गरिन्थ्यो । हेलिकोब्याक्टर
पेट सम्बन्धि समस्या के के छन् ?
जनस्वास्थ्य सरोकार । पेट सम्बन्धिको समस्या ओठदेखि मलद्वारसम्म पर्छ । त्यसबीचको सानो आन्द्रा, ठूलो आन्द्रा, पाकाशय, खानेनली सबैमा समस्या आउनसक्छ । यसका साथै लिभर, गल ब्लाडर, प्याँक्रियाजमा हुने समस्यालाई पनि
जनस्वास्थ्य सरोकार । खानपानको असन्तुलन वा शारिरीक अस्वस्थताले गर्दा प्रायलाई छाती पोल्ने र अमिलचुकी आउने गर्छ । छाती भारी भई पोलेपछि मुखबाट अमिलो पानी निक्लने समस्या हुन्छ । कतिपयलाई रोटी,
मिर्गौलाको काम गर्ने क्षमतामा एकाएक कमी आउनुलाई तीब्र मिर्गौला खराबी (एक्युट किड्नी इन्जुरी) भनिन्छ । यस किसिमको अवस्था स्वस्थ मिर्गौला वा पहिलेदेखि समस्याग्रस्त मिर्गौला दुवैमा हुनसक्छ । साधारणतया विभिन्न कारणबाट
धारणाः सबै मिर्गाैला रोग निको नहुने हुन्छन् ।तथ्यः होइन, सबै मिर्गाैला रोग निको नहुने हुँदैनन् । चाँडो निदान र उपचार गरियो भने धेरै मिर्गाैला रोग निको हुन सक्छन् । अधिकांशतः
‘कोरोना पोजेटिभ आएकाले घरमा बसेँ । कसैले पनि छुन नहुने टाढाबाट हेर्ने मात्र । त्यही बीचमा डायरिया भयो । हातखुट्टा टेकेर बाथरुम गएँ । न श्रीमती, न छोराछोरी घरका कसैले
नेपालमा मिर्गौला रोगको उपचारमा ३० वर्षको अवधिमा धेरै फड्को मारिसकेको छ । मुलुकमा डायलाईसिस, प्रत्यारोपण, मिर्गौला रोगको विभिन्न उपचारका विधिहरु धेरै भित्र्याइसकिएको भए पनि नेपालबाट बाहिर उपचार गर्न जानेहरुको संख्या
बालबालिकाहरुको घाँटी दुखेर ज्वरो आएको ३ हप्ता पछि र्‍यूम्याटिक फिवर हुने सम्भावना हुन्छ । घाँटी दुखेका करिब ३ प्रतिशत केटाकेटीहरुलाई मात्र र्‍यूम्याटिक फिवर आउँछ । प्रायश मुटुका भल्भहरु पहिलो हप्तामा
मुटु स्वस्थ राख्न यी १० कुराहरुमा ध्यान दिनुहोस्
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ ।आज सेप्टेम्बर २९ अर्थात विश्व मुटु दिवस । मन लगाउँ, मुटु बचाउँ भन्ने नाराका साथ संसारभर जनचेतनामुलक कार्यक्रम आयोजना गरेर मनाइदै छ । मानिसको दैनिकीमा बढेको
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । डा. विजय राजवंशी नेपाल मेडिसिटी हस्पिटलमा मुटु, फोक्सो र रगतको नली शल्यक्रिया गर्ने विभागको प्रमुख हुनुहुन्छ । डा. राजवंशीले अमेरिकाको मेयो क्लिनिकबाट कार्डियाक सर्जरीको फेलोसिप गर्नुभएको हो
सुन्दा पिसाब । तर विभिन्न रोगको पहिचानका लागि पिसाबको जाँच अनिवार्य हुन्छ । पिसाबको जाँच गर्दा जति साबधानी अपनाउनुपर्छ त्यतिनै नमुना संकलनमा पनि ख्याल गर्नुपर्छ । अन्यथा रिजल्ट राम्रो
गर्मीमा पिसाब संक्रमणको जोखिम
मिर्गौलाबाट पिसाब थैली हुँदै नलीबाट बाहिरिने जुनसुकै ठाउँमा कीटाणुबाट हुने संक्रमण नै पिसाबको संक्रमण हो । सामान्यतया शरीरभित्रका विषाक्त पदार्थलाई मिर्गौलाले पिसाबको माध्यमबाट बाहिर पठाउँछ । तर, गर्मीमा धेरैजसो पानी पसिनाबाट बाहिरिन्छ
पिसाबथैलीको क्यान्सरको समस्या लिएर धेरै बिरामी आउने गर्छन् । यो महिला पुरुष दुवैलाई देखिने गरेको छ । पिसाबथैलीको क्यान्सर एक किसिमको क्यान्सर हो । यसलाई युरोथेलिल क्यान्सर भनिन्छ । करिब
पिसाब शरीरको सामान्य प्रक्रिया भएकाले पिसाबबाट शरीरका लागि अनावश्यक विकार तत्वहरु बाहिर निस्कन्छ । त्यसैले आफूलाई महसुस भएको एकदेखि दुई मिनेटभित्र पिसाब बाहिर फ्याँक्नुपर्छ । पिसाबथैली भरिने बित्तिकै स्नायुप्रणालीले त्यसको